fantsom-by varahina | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
kofehy varahina varahina
Fantsom-by vita amin'ny varahina avo lenta mankany amin'ny valves varahina Tanjona: Fitsapana: fantsom-pandrosoana varahina mandroso amin'ny valves varahina Indostria: HVAC Fitaovana: fantsona varahina sy varahina Fitaovana: milina fampidirana induction DW-HF-25kw Herinaratra: 16 kW Temperature: 932oF (500oC) Fotoana : 20 segondra Coil: coil mihambo-namboarina nopetahany takelaka. Ny fizotrany: Ity fangatahana fangatahana ity dia natolotry ny orinasa HVAC ho an'ny HLQ Induction Heating Power. Ny… Hamaky bebe kokoa
Sokajy Technologies Tags fitrandrahana varahina, induction soldering, induction soldering brass, induction soldering copper, induction soldering machine, soldering, kofehy varahina varahina, fantsom-barahina varahina, fantsona varahina mandranty varahina
Fampidiran-drivotra lozan-dipoavatra matevina miaraka amin'ny toeram-piompiana heverina matetika
Tanjona: manafana ny ampahan'ny fantsom-barahina 3/8 ″ miaraka amin'ny kiho 900 hametahana azy. Ny fantsom-by vita amin'ny varahina dia ampiasaina ao amin'ny Assemblies an'ny Ice Machine Evaporator, ary ny fametahana dia apetraka aorian'ny fametrahana ireo fantsona ao anatin'ny fiangonana. Ny fanafanana dia tsy maintsy atao ao anaty coil karazana fantsona hanomezana fidirana mora vantany vao tafapetraka ny fantsona. Ny solder dia azo omena tanana aorian'ny maripana
dia efa tratra.
Fitaovana: 3/8 ″ Tuby varahina manify sy kiho 900
Fampiharana: Tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny famatsiana herinaratra fampidirana fanjakana mahery DW-UHF-20kW ary coil fantsona telo (3) tsy manam-paharoa dia tratra ireto valiny manaraka ireto:
6000F dia tratra tamin'ny 10 segondra.
Ny mpiray solira kalitao dia voamariky ny firakofana sy ny firakofana amboniny.
Fitaovana: famatsiana herinaratra fampidirana fanjakana mahery DW-UHF-20kW ao anatin'izany ny tobim-pahanginana lavitra iray (1) misy capacitor iray (1) 1.2 μF, ary coil fantsona telo (3) miavaka.
Sokajy Technologies Tags induction soldering copper, induction soldering copper pipe, varahina varahina, fanolanana fantsona varahina, kofehy varahina varahina, kofehy coppr